किन SNILS बच्चा?
अब रूसमा प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाता (SNILS) को व्यक्तिगत बीमा नम्बरलाई नियुक्त गरेको छ। यसको मतलब नागरिक नागरिक अनिवार्य पेंशन बीमा प्रणालीमा दर्ता गरिएको छ, र उहाँले एक व्यक्तिगत नम्बर निर्दिष्ट गरेको छ, जुन बीमा प्रमाण पत्रको सामनामा संकेत गरिएको छ।
प्रारम्भमा, SNILS प्रत्येक व्यक्तिलाई बीमा खाताको स्थानान्तरणको लागि स्थानान्तरणको लागि नियुक्त गरिएको थियो, जुन भविष्यमा प्यान्ट पेंशनको रकममा विभाजित गरिएको रकम। आज, SNILS द्वारा प्रदर्शन कार्य को सेट को विस्तार मा विस्तार भएको छ, र 01 जनवरी 2011 देखि बीमा बीमा प्रमाणपत्र को सबै वयस्कों र विशेष रूप देखि बच्चाहरु को लागि अनिवार्य हो ।
प्रायः आमाबाबुले खुसी भइन् किन बालबालिकाको लागि SNILS चाहिन्छ, किनकि उनी लामो समयको लागि बीमा प्रीमियम तिर्न सक्दैनन्। यस लेखमा हामी यो प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नेछौं।
बालबालिकालाई SNILS सँग किन डिजाइन गर्ने?
बीमा प्रीमियम मा संचित जानकारी को अतिरिक्त, SNILS ले निम्न कार्य गर्दछ:
SNILS मा डाटा MHIF द्वारा प्रयोग गरिएको व्यक्तिलाई नि: शुल्क पहिचान प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रयोग गरिन्छ। निस्सन्देह, SNILS को अनुपस्थितिमा तपाईं र तपाईंको बच्चाको लागि हेरचाह गर्नुपर्दछ, तर केहि परिस्थितिमा बीमा प्रमाणपत्रको प्रस्तुतीकरण प्रक्रियामा गति बढाउन र आफ्नो तंत्रहरुलाई सुरक्षित गर्न सक्दछ।
HUD नम्बर इन्टर्नेट सार्वजनिक सेवा पोर्टल पहुँच गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसैले, यदि तपाइँसँग एक बीमा प्रमाणपत्र छ भने, तपाइँ छिटो केही कागजातहरू आकर्षित गर्न र विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूमा कतारबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
प्राय: आमा र डाडहरू सोचिरहेका छन् किन बच्चाको लागि SNILS स्कूल र बालवालिकामा आवश्यक पर्दछ। जब तपाइँ यी संस्थाहरू प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, एक बीमा प्रमाणपत्रको प्रस्तुतीकरण अनिवार्य छैन, र तपाइँसँग यो इन्कार गर्न अधिकार छ। यसबाहेक, प्रशिक्षणको दौडान पाठ्यपुस्तकहरूको प्रत्येक विद्यालयको लागि आवंटित गरिन्छ, र बाल को सब्सिडी बाल को बालबालिकामा दिइन्छ । यस अवस्थामा, एसएलआईएलएस को लागी आवंटन अनुदान गणना गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ, जो बाल हेरचाह संस्थाहरु को कर्मचारी को कार्य को सुविधा प्रदान गर्दछ।
एक सानो ब्रैगर्ट - आत्म-प्रशंसाबाट बच्चालाई कसरी प्रहार गर्ने?
बच्चाहरु को लागि7वर्ष पुराना बच्चाहरुको विकास
सहनशीलताको नमुनाको लागि आमाबाबुको आमाबाबुको अधिकारको अभाव
बालबालिकाको बास्केटबल स्नर्स
बालबालिकाको जन्मदिन मेनु
तपाईसँग बिबाह बच्चा छ?
बालबालिकालाई बालबालिकाको साथ गोलाकार तालिका
छोरालाई कसरी वास्तविक मान्छे बढाउने?
नयाँ जन्मको स्नानको लागि जडीबुटी
बच्चाहरूको लागि रिले
आफ्नै लागि खेल मैदान डिजाइन गर्दै
पुरानो वायरल हेपेटाइटिस सी
हड्डी को बिना भरवां चिकन - कटौती र हरेक स्वाद को लागि सर्वश्रेष्ठ भराई को व्यंजनों को संस्करण!
रेलमा के गर्ने?
घरमा मोर प्वाङहरू किन राख्दैनन्?
डेनिम शर्ट्स - हरेक स्वादको लागि सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल
एलेक् चांग पूर्व-प्रेमी फ्रिके डकोटा जॉनसनसँग भेटिन्छ
बच्चाको चिसो हात
अनारको रस कसरी उपयोगी छ?
पूर्व पति पत्नी कैटी पेरी गर्भवती प्यारीसँग विवाह गर्छन्
बेलुका निलो ड्रेस
कसरी टोपी स्टार्च गर्न?
खमीर बिना बिरुवाको बीउसँग रोल गर्नुहोस्
शकिंग खोज: एक बिल्ली र एक जना मानिस "मसँग उठेको" मलेशियाको सबै बच्चा!
Violets को पातहरु मा स्पॉट
लेडी गागाले आफ्नो प्रेमलाई पहिलेको मंगेतर टेलर किनीको लागि स्वीकार गर्यो
कडा संयुक्त को प्लेक्साइटिस
जापानी चेरी सकुरा - कसरी हेरचाह गर्ने?
Mascarpone संग चीज